Accueil > Necrologie > 13 May: Voafitak’i Ravalo sy Rajao ary Andry
13 May: Voafitak’i Ravalo sy Rajao ary Andry
Napoitran’ny HCC (Fahefana avo momba ny lalàmpanorenana) ny fifanarahana miafina nisy teo amin’ny filoha telo lahy dia Hery Rajaonarimampianina sy Ravalomanana Marc ary Andry Nirina Rajoelina. Fanesorana an’i Hery Rajaonarimampianina no nifanarahan’ireo depiote 73 sy ingahy Ravalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoelina noho ny lalàm-pifidianana izay mampiseho ny tsy fahazoan’ireto filoha nitantana an’i Madagasaikara teo aloha ireto. Nanao fitaovana ny depiote izy roalahy ireto amin’izany, ka io iarahana mahita io fa raikitra ny tolon’ny fanovana etsy amin’ny kianja ho fitakiana ny fialan’i Rajaonarimampianina tsy ho filohampirenena intsony.
Iza koa moa no tsy mahalala fa ingahy Ravalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoelina no atidoha mikotrika ny tolona ho amin’ny fanovana io? Marina dia marina izany satria izy koa no lasibatra voalohan’ilay lalàm-pifidianana iny. Dia noporofoan’ireo depiote 73 ireo izany satria ny Mapar (Miaraka amin’ i Rajoelina) sy ny TIM ( Tiako Madagasikara ) izay antokon’ingahy Ravalomanana Marc no mandrafitra ity depiote hoan’ny fanovana ity.
Nieritreritra ny Malagasy rehetra fa ho vetivety ny fanonganana an’i Hery Rajaonarimampianina ity ka tsy hitarozaka toy izao. Lasa raharahan’ny Malagasy ny fitakiana ny hialan’i Rajao ity. Naiza naiza ny aleha dia izao no feo heno: “miala Rajao!”
Tsy ireo hitan’ny maso sy ren’ny sofina ireo nefa no mamaritra ny fanapahan-kevitra politika toa itony fa ny fifanarahana miafina izay ataon’ireo olona mihevitra fa manana hery politika. Nanomboka ny volana janoary 2018 dia nandeha tokoa ny feo fa nihaona i Andry Rajoelina sy Ravalomananana Marc. Samy tsy nisy nandà izany izy roalahy ireo, na dia noheverin’ny be sy ny maro fa sakay sy maso aza izy roalahy ireto noho ny raharaha ny 7febroary 2009 iny ary ny fanonganana an-dRavalomanana iny.
Fantatra koa taty afara fa nisy ny fihaonana miafina nataon’izy telo lahy ireo dia Andry Nirina Rajoelina sy Ravalomanana Marc ary Hery Rajaonarimampianina izay niarahan’izy ireo tamin’ny komity iraisam-pirenena, ka ingahy Chissano no nitarika izany. Io ilay voalaza matetika fa nisy ny fifanarahana miafina ankehitriny. Tsy azo nosakanana intsony nefa ny fihetsiketsehana tetsy amin’ny kianjan’ny 13 may izay notarihan’ny depiote 73 ireto sy ny vahoaka efa marobe nomba azy.
Navoakan’ny HCC ny ny didy izay nangatahan’ireto depiote 73 ireto, nefa dia tsy miala Rajao. Mbola nanampy lakile indray aza no nataony tamin’ny alalan’ingahy Eric Rakotoarisoa izay filohan’ny HCC.
Fifanarahana politika indray no navoakany amin’ny alalan’ny lalàna. Io ilay fifanaraha miafina nataon’izy telo lahy ireto ka nahavoafitaka ny mpitolona eo amin’ny kianja ny 13 may izao.
Anaovan’izy telolahy ireto sakodim-panina ny vahoaka ka hafa no lazain’ny vava nefa toerana hafa no tondroin’ny molotra.
Samy fetsifetsy sy be saina izy telolahy ireo ka izao mihevitra hamita-bahoaka izao indray. Isan’ny tompon’andraikitra amin’ny fanapahan-kevitry ny HCC iny ingahy Andry Rajoelina sy Ravalomanana Marc. Porofo mitohoka amin’ny tendany amin’izany ny fahanginanan’izy roalahy ireo rehefa nivoaka iny didy avy amin’ny HCC iny.